UnguMhlobo wam osenyongweni nguKumkanikazi - Izinto Zobugcisa
UnguMhlobo wam osenyongweni nguKumkanikazi
I-Queen bass player uJohn Deacon ubhale le ngoma. Onke amalungu eqela abhale ubuncinci enye yeengoma zabo.
UJohn Deacon wabhala le ngoma ngomfazi wakhe. Wayebunandipha ubomi obuzolileyo ekhaya, ngakumbi kwiintsuku zokuqala zeqela wayenentloni kwaye ethule, engathandi ukubeka iingoma zakhe phambili.
Emva kokubhubha kukaFreddie Mercury ngo-1991, uDikoni waba yinto yokuhamba yedwa - wayebandakanyeka kwi-albhamu emva kokufa Yenziwe ezulwini , kwaye ngo-1997 engatshatanga 'Akukho mntu kodwa Wena,' uthathe umhlala-phantsi emculweni kwaye wenqabile ukhenketho kunye neqela kukhenketho lwabo olulandelayo noPaul Rodgers noAdam Lambert. Ibhendi isagcina unxibelelwano naye, kwaye ibaleka izigqibo ngaye-ngokukaBrian May, umgaqo kukuba ukuba uMdikoni akaphenduli kwi-imeyile, yindlela yakhe yokuthi uyamkelwa.
Umdikoni wayedlala ipiyano yombane kule ngoma, eyayiyinto ekhethwayo ngelo xesha, ngeengoma ezininzi zerock ngokuthandwa nguStevie Wonder noSteely Dan besebenzisa enye. Ipiyano inokuba yayiyiFender Rhodes okanye iWurlitzer, okanye mhlawumbi indibaniselwano yomibini- imithombo iyahluka. Umdikoni wayefuna ukubhala ingoma edibanisa isixhobo, kodwa uFreddie Mercury, indoda yebhodi yezitshixo, wayengafuni ukuyidlala. Ndalile ukudlala loo nto, utshilo uMercury. Incinci kwaye yoyikekayo kwaye andibathandi. Kutheni uzidlala xa unepiyano entle. '
U-Dikoni ke wagoduka nepiyano yombane, wayifunda wayidlala, waqalisa ukubhala le ngoma.
Yayilulandelelo olulodwa ' ibohemian rhapsody . ' Yayiyingoma yesibini kaKumkanikazi (emva 'kweBohemian Rhapsody') ukufumana ividiyo ekhutshelweyo ehamba nayo.
I-remix yesandi esingqonge le nto ibandakanyiwe xa i-albhamu yakhutshwa kwakhona ngo-2002.
Oku kubonisiwe ekugqibeleni kwe-zombie movie parody UShaun wabafileyo , Kunye nefilimu ka-Adam Sandler Ngoku ndikuvakalisela u-Chuck kunye noLarry . Yayisetyenziswa nakwikhredithi yokuvula yemovie Ukwahlukana Inkwenkwezi uJennifer Aniston kunye noVince Vaughn, ngelixa umboniso wesilayidi wemifanekiso yabo uqengqeleka.
URaina-Manila, Philippines, Tommi - Porvoo, Finland kunye noMike-Detroit, MI
Uyakucacisa ukuba ungoyena mntu
ovuma ingoma uthando lubuhlungu
ngaphakathi kwakho kubi kubi njengam lyrics
U-gary moore usenayo i-blues lyrics
ukuba awuyiyo kwi-yoga
Kukho umntu owakhe wandixelela ukuba umhlaba uza kundigoqa, ayisiso esona sixhobo sibukhali eshedini